Burcad badeeda oo gacanta ku dhigay Markab laga leeyahay Gariiga | raascasayrmedia.com
← Shariif : “gudoonka Barlamanka kama hor imaan karo go’aankeyga”
Shabaab oo madaafiic qasaare geysatay ku weeraray Madaxtooyada →
Burcad badeeda oo gacanta ku dhigay Markab laga leeyahay Gariiga
Kooxaha burcad badeeda Soomaalida ayaa saacadihii lasoo dhaafay gacanta ku dhigay Markab laga leeyahay dalka Gariiga kaasi oo ka dulbabanayay calanka Jasiiradda Paanama.
Afhayeenka u hadlay ciidamada Midowga Yurub ee ku sugan xeebaha Dalka Soomaaliya ayaa waxaa uu cadeeyay in aroornimadii saakay ay kooxha burcad badeeda Soomaalida qafaasheen Marakab laga leeyahay dalka Gariiga kaasi oo marayay Woqooyi bari xeebta Salalaha ee dalka Yemen.
Markabkan ayaa la sheegay in uu kasoo shareecday dekadda Quasim ee dalka Pakistan kaasi oo la tilmaamay in uu kusii jeeday dekadda Saleef ee dalka Yemen kaasi oo ay kooxha burcad badeeda weerar xoogan kadib u suura gashay inay gacanta ku dhigaan.
Markabkaan ayaa la tilmaamay inay saarnaayeen shaqaale gaaraya 23- kuwaasi oo u kala dhashay dalalka Romania, Russia iyo Philippine, waxaana kooxha burcad badeeda ay ula soo dhaqaaqeen xeebaha Soomaaliya oo ay ku leeyihiin burcad badeeda fariisimo xoogan.
Badwaynta Inida ayaa waxaa ku sugan Maraakiib dagaal oo aad u faraban kuwaasi oo ka kala socda wadamo badan oo ka tirsan Caalamka islamarkaana la sheegay inay ka hortagaayaan weerarada xoogan ay burcad badeeda ku qaadaan Maraakiibta isticmaasha gacan biyoodka Cadmeed iyo meelaha ka baxsan hase ahaatee aan muuqan ilaa iyo iminka talaabo ay ka qaadeen burcad badeeda Soomaalida.